Ka Daawo Josh Brolin Tijaabinta Codkii Thanos Ee Lahjadaha Kala Duwan Showgii Caawa - Dhaqanka Pop
Ka Daawo Josh Brolin Tijaabinta Codkii Thanos Ee Lahjadaha Kala Duwan Showgii Caawa
Avengers: Infinity War 'wuxuu ku socdaa wadadii uu ku noqon lahaa filimkii superhero ee ugu lacagta badnaa abid.
iyada oo loo marayo Wararka Complex
moofo aroos leh talooyin ubax cusub
Josh Brolin wuxuu leeyahay daqiiqad. Iyadoo Deadpool2 oo qarka u saaran in tiyaatarada laga sii daayo, jilaaga 50 jirka ah ayaa qarka u saaran inuu yeesho laba ka mid ah aflaamta ugu waaweyn sanadka. Midda kale, dabcan, waa Avengers: Dagaalkii Infinity, kaas oo uu ku jilayo filimka weyn ee xun, Thanos.
Markaa inkastoo Brolindropped by Barnaamijka Caawa oo uu jilayo Jimmy Fallon inuu ka hadlo kuwiisa DP2 Cable, Fallon ma caawin karin laakiin wuxuu soo bandhigay waxqabadkiisii ​​hore ee astaanta u ahaa marquee Aargoosatada cadow.
Hal dhibic, lammaanuhu waxay maleeyeen waxa Thanosmight u eg yahay haddii uu ka soo jeedo Brooklyn. Isticmaalka xigashada saxiixaThanos: 'Ka cabso, ka orod ... Aayaha ayaa isku mid ah. Oo hadda, waa halkaan Mise waxaan idhaahdaa ... Anigu waxaan ahay 'sidiisaba, Brolin iyo Fallon waxay dib u maleeyeenThanos oo leh lahjado kala duwan. Daawo waallida oo ka bilaabmaysa calaamadda saddexda daqiiqo ee fiidiyaha hoose.
Brolin wuxuu ku bilaawday buufinta isagoo si aad ah u qaata sharwadaha, ka hor inta Fallon uusan la jaanqaadin nooca gabdhaha dooxada. , dugsi jirBrooklynites.
'Qaddarku halkaan ha ka welwelin xitaa,' ayuu yidhi Brolin. 'Yaa, Destiny halkaan ka eeg, waad arki kartaa!'
Markii labadoodu aysan isku dayin inay Thanosmore ka dhigaan mid la jeclaado, waxay ka hadleen jadwalka waalan ee Brolin, kaas oo ku lug lahaa inuu ku qaldamo joogitaanka Josh Groban. Cid kasta oo khaladkaas sameysay ayaa tan iyo markaas dambas noqotay.
Sida haddii aad u baahan tahay xusuusin kale, Deadpool 2 soo gaara tiyaatarada 18 -ka May.
sida loo sameeyo dhadhanka cake sida roodhida
sida loo akhriyo wiqiyadaha miisaanka
saddexda ugu badan ee ciyaarta nba
waxaad i dishay i soo xigasho yaryar